Tsy nifandrenesana ny poa-basy: dahalo efatra lavon’ny zandary, tafaverina ny omby anjatony | NewsMada
Tany amin’ny kaominina ambanivohitr’i Beraketa, tao amin’ny kizo antsoina hoe Antsary no nitranga ny fifandonana. Nirefodrefotra tsy nifandrenesana ny poa-basy. Dahalo efadahy no lavon’ny balan’ny zandary, nampian’ny fokonolona mpanara-dia tamin’izany, ary tafaverina ny omby anjatony norobain’izy ireo.
Nirefodrefotra ny poa-basy nandritra ny fifandonan’ny zandary sy ny dahalo tao amin’ny kizo atao hoe Antsary, fokontany Benato, kaominina ambanivohitr’i Beraketa, ny alahady lasa teo. Nitrangana halatr’omby tao amin’ny fokontany Behara, kaominin’i Tanandava, distrikan’i Bekily, faritra Androy, tamin’io fotoana io tokony ho tamin’ny 11 ora alina. Naharay antso ny zandary avy ao amin’ny borigady Beraketa (kaompania Bekily sy ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria Androy) niaraka tamin’ny “2ème section Usad 14” sy ny zandary rehetra any an-toerana. Fantatra nandritra ny fanadihadiana nataon’ny zandary fa omby miisa mitotaly 113 ny lasan’ireo malaso ka raikitra avy hatrany ny fanarahan-dia sy ny fifanenjehana. Teo amin’ny kizo atao hoe Antsary, fokontany Benato, distrikan’i Beraketa, nifanehatra tamin’ireo mpanara-dia ireo dahalo ka raikitra ny fifampitifirana.
Raitra ny fitaovam-piadian’ny zandary…
Namaly tifitra avy hatrany ny zandary miaraka tamin’ny fitaovam-piadiana vaovao sy matanjaka. Vokany, dahalo efatra indray maty rotiky ny bala. Nirifatra ireo dahalo sasany rehefa hitan’izy ireo fa nahery vaika ny fanafihana nataon’ireo zandary ka navelan-dry zalahy ireo omby miisa 113. Naverin’ny zandary amin’ny tompony ireo omby rehefa tonga tao amin’ny tobin’ny zandarimaria ao Beraketa. Nomarihin’ny zandary hatrany fa ny alakamisy 11 jolay 2019 nifoha zoma lasa teo, omby miisa 120 no tafaverin’ny zandary sy ny Usad amin’ny tompony. Nidera manokana ny ezaka vitan’ny zandary ny fokonolona ao Beraketa, indrindra tamin’ny fandefasana ny Usad any Bekily mba hampandry tany.